Etiopiana Mpiangaly Mozika Voampanga Ho Mpanao ‘Fampihorohoroana’ Noho Ny Tononkirany ‘Mandrisika’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2017 2:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Italiano, عربي, Français, Español, 繁體中文, Deutsch, English
Fito ireo mpamokatra sy mpanakanto taminà lahatsary mozika Youtube malaza iray no voampanga ho mpanao fampihorohoroana tao Etiopia tamin'ny volana Jona lasa teo noho ny fanaovana votoaty an-tsary sy feo ‘mandrisika’ ary noho ny ‘fampiakarana azy ireo tao amin'ny Youtube’.
Nanomboka tamin'ny volana Desambra 2016, notazonina tao Maekelawi i Seenaa sy ireo mpiara-miasa aminy— fonja iray malaza noho ireo fampiharany fampijaliana, araka ny notantarain'ireo voafonja taloha tao. Fotoana fohy taty aorian'ny fisamborana azy ireo, dia nanoratra i Jawar Mohamed, mpikatroka amin'ny aterineto sady talen'ny fahitalavitra ampielezana mandeha amin'ny zana-bolana:
Tao amin'ny fandrakofany ny fisamborana ireo mpikambana ao amin'ilay tarika, nitatitra ny orinasam-panjakana Fana Broadcasting Corporation fa namokatra lahatsary mozika, tononkalo sy tafatafa niarahany tamin'ny mpitsikera ny fanjakana i Senaa sy ireo mpiaraka aminy, niarahany niasa tamina fikambanana politika any ampielezana mitoetra ao Aostralia.
Tsy ry zareo no voalohany miatrika famoretana toy izany. Tamin'ny volana Janoary 2016, dia naiditra am-ponja i Hawi Tezera, Oromo iray hafa mpihira izay nankahery sy nitaona ireo mpanao hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ireo hirany. Tamin'ny volana Febroary 2017, voasambotra i Teferi Mekonen, Oromo iray mpihira izay nanizingizina ny maha-izy ara-kolotsaina ny oromo sy nankahatra ny maha-mamim-bahoaka ny antoko mitondra ao Etiopia tamin'ny hirany. Taty aoriana, navotsotra i Hawi, fa tsy mbola fantatra foana kosa izay hiafaràn'i Teferi.
Araka ny fitomboana ny fahitàna an'ireo mpihira politika, nohamafisin'ireo manampahefana Etiopiana ny famoretana ataony amin'ireo mpanao mozika izay hitany ho mifandray tsara amin'ny antoko mpanohitra. Saingy tsy voatery nahakely jery na kely laza ireo mpanakanto izany. Mbola mitohy miroborobo ihany ao amin'ny Youtube ny mozika fanoherana. Na eo aza ny zavamisy hoe any am-ponja ireo mpanakantony, mbola mitazona isa mahatalanjona foana izay mihoatra ny jery 3.525.996 ny fantsona Youtube-n'i Seenaa Solomon.